के एनसेलले तिर्ला यतिका धेरै पैसा? – Nepali News Portal – Trending Nepali News
के एनसेलले तिर्ला…
के एनसेलले तिर्ला यतिका धेरै पैसा?
एनसेल कर विवादको विषयमा परेका छुट्टाछुट्टै चार वटा रिट माथि एक मुष्ट सुनुवाइ गर्दै व्रिहत इजलासले लाभ कर, एनसेल बाटै उठाउन आदेश दिइएको हो । लगातार ५ दिनको सुनुवाइ पछि प्रधान न्यायधिशको इजलासले दिइएको आदेशले नेपालको अर्थ बजारमा तरङ पैदा भएको छ । यस अघि न्यायधिश शारदा प्रसाद घिमिरेले यो मुद्दाको नेतृत्व गरेका थिए।
पुष २२ गते घिमिरेको अवकास पछि एनसेलसँग सम्बन्धित सबै मुद्दालाई एक ठाउँमा राखेर सुनुवाई अगाडि बढाइएको थियो। सर्वोच्चले लाभ कर असुल्न आदेश दिनु अघि ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलको कुल मूल्य १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ आधार मानेर कर निर्धारण गरेको थियो। ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख ब्याज गरि ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। कर निर्धारण हुनु अघि नै एनसेलले दुइ पटक गरि २१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ तिरेको छ। यघपि ठुला कर दाता कार्यालयका सुचना अधिकारी कृष्ण मैनालीले भने अदालतको पुर्ण पाठ नआइ ठ्याक्कै अंक तोक्न कठिन हुने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले मंगसिर २१ गते संसदको लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार पनि एनसेलले नेपाल सरकारलाइ ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ। एनसेल खरिद बिक्रि भएको ३ वर्ष भन्दा बढि समय भइसकेको छ। तिर्नु पर्ने लाभकर र बिलम्ब वापतको जरिवाना सहित अब एनसेलले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयको राजस्व शाखाले जनाएको छ। एनसेलको १२ पटकको बिक्रेता टेलिया सोनेरा नेपालबाट भागेपछि आजुयटा र एनसेलले लाभकारको दायित्व टेलिया सोनेराको भन्दै पन्छदै आएको थियो।
एनसेलको लाभकार प्रकरणमा नेपालको उच्च पदस्त अधिकारीको समेत संलग्नताको आरोप लागेको छ। निक्कै चर्चित यो प्रकरणमा अदालतले गरेको यो फैसलालाइ निक्कै महत्वपुर्ण मानिएको छ।
भारतिय अभिनेत्री अनुष्का शर्माको हुबहु अर्को रुप अमेरिकामा
वर्षको नौ महिनासम्म हिउँ जम्ने, विश्व कै सबैभन्दा चिसो शहर